Espana sy Etazonia Mitombo be ireo tsy an’asa
Nitombo 300 000 ny isan’ireo tsy an’asa any Espana ary amin’izao fotoana izao dia miisa 6 600 000 izay manome 10% amin’ny vahoaka amerikana no tsy miasa.
Izany no anisan’ny voka-dratsy ara-toekarena entin’ny aretina Coronavirus. Ankoatr’ireo firenena matanjaka ireo dia efa maro ihany koa ireo firenena hafa na manankarena na an-dalam-pandrosoana miroso amin’ny tsy maintsy fampijanonana ireo mpiasa. Anisan’izany i Italia izay vinavinain’ny mpahay toekarena ho voa mafy indrindra noho nyaretina hatreto. Amin’izao fotoana izao mantsy dia tombanana ho aotra mihitsy ny fitomboana ara-toekarena misy any an-toerana amin’ity taona ity na dia ho resy aza ny aretina. Manoloana ireo tsy fisian’asa maro be any Espana sy Etazonia ireo dia efa misy hatrany ny aro fanina napetraka ary mahazo tsara ny zavatra ilainy an-davan’andro ny ankamaroan’ireo olona ireo. Mampanahy sy tsy azo eritreretina raha izany toe-javatra izany no tonga eto Madagasikara !!